Omby 524 nalaina an-keriny tao Andilamena Miantso vonjy amin’ny fanjakana ireo lasibatra
Omby 524 no nalaina an-keriny tany Andilamena nentina ao Mampikony, ary 196 nentina any Marovato Port Bergé ny volana jona teo.
Lasa lonilony eo amin’ny Faritra Sofia sy Alaotra Mangoro ny raharaha. Nambaran’ny solontenan’ireo mahatsapa ho lasibatra avy any amin’ny faritra Alaotra, fa diso ny tatitra nataon’ny zandary miisa 20 niaraka tamin’ny Besaboa avy any Sofia, nilazana fa omby tratra niaraka tamin’ny dahalo ireo fa nalaina an-keriny tany am-bala na teny am-piandrasana. Nofitahina ny ben’ny tanànan’i Maitsokely Andilamena, ka nosamborina sy nogadraina, hoy izy ireo. Milaza ho tompon’ireo omby avokoa ny olona, ary manao taratasy fa tsy tena bokin’omby. Ny omby iray, ohatra, dia misy olona 3 na 4 milaza ho tompony. Ny taona 2008 dia omby 80 no efa nalaina tao Ambatomarokoroko Kaominina Miarinarivo Andilamena. Ny taona 2010, dia omby 170 no nalaina niampy olona 4 nogadraina. Tamin’ny 2017, dia zandary 17 no niaraka tamina andian’olona naka omby 320 no nalaina tao Maroadabo, ka na nilaza aza ny zandary tao an-toerana fa ao ihany no atao ny fanamarinana, dia tsy nety ny an-daniny fa nentiny ny omby, ary 190 no sisa tafaverina. Any Mampikony na Port Bergé na Mandritsara no hitondrana ny omby. Diso fanantenana izy ireo tamin’ny tsy fahatongavan’ny praiminisitra sy ny delegasionina tarihiny ny 10 jolay teo ireo mahatsiaro tena ho lasibatra. Manantena sy mbola miantso vonjy amin’ny fitondram-panjakana hijery ifotony ny zava-misy izy ireo.